नेविसंघका महामन्त्री काफ्ले भन्छन : 'अध्यक्षले विधान नमान्ने काम गरिरहेका छन्' - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
नेविसंघका महामन्त्री काफ्ले भन्छन : ‘अध्यक्षले विधान नमान्ने काम गरिरहेका छन्’
Posted by Milap Subedi | ३१ बैशाख २०७५, सोमबार १३:५८ |
कुन्दनराज काफ्ले, महामन्त्री नेपाल विद्यार्थी संघ
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मा पछिल्लो समय देखिएको विवाद र यसले चरम रुप लिँदैछ । नेविसंघभित्र विभिन्न गुट उपगुटले आ–आफ्नै ढंगले गतिविधि गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्ने काम पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रयास गरिरहेको छ । नेविसंघको विवाद छताछुल्ल बाहिर आएको छ । यो विवाद किन ? यसको समाधान के हो ? भन्ने सवालमा रहेर राज ढुंगानाले नेविसंघ महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेसँग गरेको कुराकानी–
नेविसंघ ध्वस्तै बनाउने हुनुभयो है ?
-नेविसंघ केका लागि स्थापना गरियो ? यसको मूल मर्म के हो ? लोकतान्त्रिक पार्टीमा पारदर्शिता हुन्छ, त्यसको भ्रातृ संगठन हौं हामी । संगठनभित्र भएका कुरा सबै विद्यार्थीले थाहा पाउनुपर्छ । संगठन पारदर्शी, वैज्ञानिक हुनुपर्छ, विधिसम्म चल्नुपर्छ । हामीले बनाएको संगठन नमूना हुनुपर्छ ।
तपाईंहरुले बनाएको विधान प्रकृयामा जाँदैन भने त्यो कसरी बलियो भयो ?
-विधान मात्रै पर्याप्त होइन, त्यसलाई नीतिले डो¥याउनुपर्छ । विधानलाई वैज्ञानिक ढंगले समयसापेक्ष लैजानुपर्छ । विधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । अध्यक्षले हाम्रो संगठनमा विधान नमान्ने काम गरिरहेका छन् ।
विधानसम्मत निर्वाचित अध्यक्षले तपाईंले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने ?
-तपाईंको प्रश्न नमिलेको हो कि बुझनु नभएको हो रु सभापति मात्र होइन, कोही पनि विधानभन्दा माथि छैन । कोही पनि केन्द्रीय समितिको निर्णयभन्दा माथि छैन । सबै कुरा केन्द्रीय समितिको निर्णयभन्दा बाहिर भएकाले हामीले त्यसको विरोध गरेका हौं ।
समानान्तर गतिविधि गरेपछि संगठन कहाँ पुग्छ ?
– सभापतिले जे गरे, त्यो कुरा सहेर बसेको भए कसैले थाहा पाउँदैन थिए । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले के गर्दैछ भन्ने कुरा आम विद्यार्थीले थाहा नपाउनु ठीक होइन । हामीले खबरदारी गरिरहेका छौं । सबैलाई प्रकृयाभित्र ल्याउन खोज्दैछौं । नेपाल विद्यार्थी संघ सीमित व्यक्तिको चँगुलमा रहेका व्यक्तिहरुको मात्रै होइन । नेविसंघ सबैको साझा संगठन बनाउनुपर्छ । हामीले समानान्तर गतिविधि गरेका छैनौं, हामीले नीतिगत ढंगले नेपाल विद्यार्थी संगठन चल्नका लागि हामीले खबरदारी गरेका हौं ।
नेविसंघका बेथिति कहिलेसम्म ?
– सुन्दरीजलमा दुईवटा कार्यक्रम भएको होइन, ११ औं महाधिवेशन गर्दा पुराना कमिटीले ११ जिल्लामा अधिवेशन नभएको भनेर पार्टीलाई जानकारी गराएका थियौं । त्यसपछि ११ जिल्लामा यस्तो विवाद थपियो । २२ वटा जिल्लामा समानान्तर समिति बनेको थियो । ११ जिल्लामा ३ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने भनिएको थियो । अर्को ११ जिल्लामा ३ महिनापछि प्रतिनिधि पठाएर अधिवेशन गराउने भनेर निर्देशक समितिले लिखित रुपमा ठाडो निर्देशन दिएको थियो । दुई तिहाई निर्वाचित साथीहरुले ठाडो अब्जेक्सन ग¥यो ।
अहिले संघीय ढाँचामा जाँदा प्रदेशिक सभा कस्तो बनाउने, समिति कस्तो बनाउने, अधिवेशनमा कसरी जाने, प्रदेशलाई कसरी कति शक्ति दिने, केन्द्रमा कति शक्ति राख्ने, स्थानीय तह र जिल्लालाई कति शक्तिशाली बनाउने भन्नेबारेमा हामीले नेविसंघको स्पष्ट नियमावली बनाउन सकेनौं । हामीले बनाउन खोज्दा सिनेटरको बैठक डाक्नुपर्छ ।
सभापतिले दम्भको राजनीति गर्नुभयो । कम्युनिष्ट एकताले विभिन्न नाममा कांग्रेसमाथि आक्रमण भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले विधिवत ढंगले संगठन चलाएर नेविसंघलाई सम्पूर्ण विद्यार्थीको आकषर्णको केन्द्र बनाउने हाम्रो अभियान थियो । त्यो अभियानलाई सभापतिजीले मनलाग्दी ढंगले अध्यक्ष तोक्न थाल्नुभयो ।
जिल्ला र क्याम्पसमा नेतृत्व सभापतिले तोक्न थाल्नुभयो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सभापतिजीले मनलाग्दी ढंगले अगाडि बढेको कारणले नेविसंघ नेतृत्व जिम्मेवार ढंगले अघि नबढेको हुनाले हामीले बारम्बार खबरदारी गयौं ।
Previousकाष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम सुरु
Nextप्रदेश सांसद हरीशरण लामिछानेको निधन
दुई महिनामामात्रै १ सय २० अर्ब राजस्व संकलन
२ आश्विन २०७५, मंगलवार १४:२०
अकाशमै आगो लागेको एअर फ्रान्सको जेट विमान क्यानडामा आकस्मिक अवतरण
१५ आश्विन २०७४, आईतवार १२:१५
झन् उग्र बन्दै राजपा आन्दोलन : सिराहामा प्रहरीको गाडी तोडफोड, परासीमा जलाए कांग्रेसको झण्डा
२ असार २०७४, शुक्रबार १५:११
कहाँ–कहाँ छ खतरा ? पूर्वी नेपालमा मौसममा क्रमिक सुधार, पश्चिम नेपालमा जोखिम कायमै
३० श्रावण २०७४, सोमबार ११:१९